MADHURI DIXIT အသက်၊ အမြင့်၊ လင်ယောက်ျား၊ ကလေး၊ မိသားစု၊ - ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီး
Madhuri Dixit အသက်၊ အမြင့်၊ လင်ယောက်ျား၊ ကလေး၊ မိသားစု၊
နာမည်အပြည့်အစုံ Madhuri Shankar Dixit
နာမည်ပြောင် (များ) Bubbly, Dhak-Dhak မိန်းကလေး
မွေးနေ့ 15 မေလ 1967
ကျောင်း မြင့်မြတ်သောကလေးအထက်တန်းကျောင်း၊ မွန်ဘိုင်း
ကောလိပ် ကောလိပ်, မွန်ဘိုင်းပြောသော
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းများ Micro- ဇီဝဗေဒအတွက်ဒီဂရီ
အချစ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Abodh (1984)
တီဗီပွဲ ဦး ထွက် Kahin Na Kahin Koi Hai (၂၀၀၂)
မိသားစု ဖခင် - နှောင်းပိုင်း Shankar Dixit
အမေ - Snehlata Dixit
အစ်ကို - The Ajit
နှမ - Rupa ကပြောသည် Bharati ကဆိုသည်
လိပ်စာ 2-B / 110/1201, ထူးမြတ်သော, 4th Cross Road, Lokhandwala, Complex, Andheri (West),
ဝါသနာ အက, အဖတ်
အငြင်းပွားမှုများ Dayavan (၁၉၈၈) ရုပ်ရှင်အတွက်သူမအနှစ် ၂၀ သက်တမ်းရှိသရုပ်ဆောင် Vinod Khanna နှင့်သူမအနမ်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရစဉ်ကအပြောင်မြောက်ဆုံးအနမ်းပန်းချီများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမကထိုမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုလုံးလုံးငြင်းပယ်သင့်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
•သူမသည်မဂ္ဂီထုတ်ကုန်ကိုမြှင့်တင်ရာတွင်ကလေးများအတွက်အလွန်ကျန်းမာသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မဂ္ဂီအငြင်းပွားမှု (MSG အမြောက်အများ) အပြီးသူမအတွက်ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ ခရိုင်တရားရုံးတစ်ခုကရဲကို FIR ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည် Amitabh Bachchan , Madhuri နှင့် Preity Zinta , ဒါအတွက်။
• အကယ်၍ ကောလာဟလများကိုယုံကြည်ရမည်ဆိုပါက ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူမဟာ ၉-၁၀ Crore (INR) ပမာဏကို Maharashtra ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်ကြီးအဖြစ်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒီသတင်းဟာမကြာခင်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျံ့နှံ့သွားပြီးသူမအတွက်အလွန်ဈေးကြီးလွန်းတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ် Hrithik Roshan သူမ၏အစားထိုး။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ Kande Pohe, Zunka Bhakar, Modak
အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင် (များ) Balraj Sahani, ဂရက်ဂိုရီ Peck
အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး နာဂစ်၊ မက်ဒူဘလာ၊ Meryl Streep၊ Ingrid Bergman
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင် (များ) ဘောလီဝုဒ်: Garam ဟာဝိုင်၊ ဂန်ဂါဂျမနာ၊ ရှလေ၊ ပါဒါဆန်၊
ဟောလိဝုဒ် ရောမအားလပ်ရက်၊ လေနှင့်အတူ Eve ၀ ံဂေလိဖြစ်သည်
အကြိုက်ဆုံးအက (များ) Hema Malini, ဟယ်လင် , Birju Maharaj, Gene ကယ်လီ
အကြိုက်ဆုံးစာအုပ် ဂျက်ဖရီ Archer အားဖြင့်မြှားအပြည့်အဝတစ် ဦး က Quiver
အကြိုက်ဆုံးရေမွှေးများ နီနာ Ricci, Issey Miyake
ရေးရာ / ရည်းစား Anil Kapoor (မင်းသား၊ ကောလာဟလ)
Sanjay Dutt (မင်းသား)
Ajay Jadeja (ယခင်ကအိန္ဒိယခရစ်ကက်သမား)  နေ့စဉ်မုဆိုး
ခင်ပွန်း / ဇနီး Shriram Madhav Nene (ဆရာဝန် - နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်၊ ၁၉၉၉)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် ၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၉၉၉
ကလေးများ သူတို့က - Raayan Nene, Arin Nene
ကားစုဆောင်းခြင်း SUV ကား
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) 3-4 ကုreေ / ရုပ်ရှင် (INR)
၁ ကုcroေ / ဇာတ်လမ်းတွဲ (INR)
Madhuri Dixit နှင့် ပတ်သက်၍ လူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Madhuri Dixit ဆေးလိပ်ပါသလား? ဖြေ - မဟုတ်ဘူး
Madhuri Dixit သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား? ဖြေ - မဟုတ်ဘူး
Madhuri ကိုလူလတ်တန်းစားမာရသီ - ဗြဟ္မာမိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
သူသည်အသက် ၃ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်သင်ယူခဲ့ပြီးငယ်ရွယ်သောအချိန်တွင်သူမ၏ကက်တက့အတွက်ဆုများစွာရရှိခဲ့သည်။
Madhuri Dixit ရဲ့ကလေးဘဝဓာတ်ပုံများ
၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်သူသည်ရုပ်မြင်သံကြားပြသခြင်းတွင်အမှန်တကယ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုလူအနည်းငယ်လောက်သာသိသော်လည်း၊ ၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ။
Madhuri Dixit သည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်တီဗီရှိုးတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်
ဘောလီးဝုဒ်သို့မဝင်မီသူမသည်အိန္ဒိယတွင်ထိပ်တန်းမော်ဒယ်ဖြစ်သော်လည်းရုပ်ရှင်၏ပုံစံကိုစီးပွားဖြစ်အောင်မြင်မှုများရရန် ၈ နှစ်ကြာခဲ့သည်။ Teazab (1988) ။
“ Do Do Teen” ရုပ်ရှင်အတူတူသူမ၏သီချင်းသည်စုစုပေါင်း chartbuster ဖြစ်ပြီးဘောလီးဝုဒ်မှဂန္ထ ၀ င်များတွင်ပါ ၀ င်ဆဲဖြစ်သည်။
သူမသည်ထိုရုပ်ရှင်အတွက် Salman Khan (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃ Crore) ထက်ပိုမိုသောအခကြေးငွေများပေးခဲ့သည် Hum aapke hain koun (1994) ။
Hum Aapke Hain Koun မှ Madhuri Dixit နှင့် Salman Khan
Kargil စစ်ပွဲသည် Indo-Pak နယ်စပ်တွင်ဖြစ်ပွားနေစဉ်ပါကစ္စတန်စစ်သားများက Captain Batra အား“ အိန္ဒိယက Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Madhuri Dixit ကိုသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးရင်သူတို့ကဒီနေရာကိုအမြဲတမ်းထားခဲ့လိမ့်မယ်” ဗိုလ်ကြီး Batra က“ Madhuri ji ကိုအလုပ်များသော hain၊ အဓိက aa jata hun” သို့သင့်လျော်စွာပြန်ဖြေသည်။
လူအနည်းငယ်သာ Madhuri သည် Cricketer ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့ကြောင်းသိသည်။ Sunil gavaskar ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် India Today နှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Madhuri က“ Sunil Gavaskar ကိုငါရူးသွားပြီ။ သူကအရမ်း sexy ပါ။ ငါသူ့နောက်ကိုပြေးချင်တယ်၊ သူလည်းငါ့အိပ်မက်ထဲဝင်လာတယ်။ ”
ကျော်ကြားသောပန်းချီဆရာ M.F. ဟူစိန်သည်သူမအားကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးမိန်းမဟုခေါ်ပြီးရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားရိုက်ခဲ့သည် Gaja Gamini သူမအတွက်အခွန်ဆက်အဖြစ်သူခေါ်သော (2000), သူမနှင့်အတူပြုမူသော Shah Rukh Khan ။
သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းအားဖြင့် UCLA နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်သောသူမ၏ခင်ပွန်းဒေါက်တာ Sriram Nene နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
သူမသည်တစ် ဦး ဝတ်ဆင် Ghaghra အတွက်“ Kahe Ched Ched Mohe” သီချင်းထဲတွင် နတ်သမီး 30 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်သော (2002) ။
Kahe Ched Ched Mohe သီချင်းထဲတွင် Madhuri Dixit
သူမသည် Filmfare အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက် ၁၃ ကြိမ်လျာထားခံခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောဘောလီးဝုဒ်မှမင်းသမီးဖြစ်သည်။
သူမသည်စိတ်အားထက်သန်သောအကသမားဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Dance With Madhuri ဟုခေါ်သောအွန်လိုင်းအကသင်တန်းကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
သူမသည်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားနေသည် သရက် ။
အကယ်၍ မင်းသမီးတစ် ဦး မဟုတ်လျှင်သူသည်အဏုဇီဝဗေဒပညာရှင်သို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Sapna vyas patel အဆက်အသွယ်နံပါတ်
nisha agarwal နှင့် karan valecha
Raja Rani semba အစစ်အမှန်နာမကိုအမှီ
ias toppers 2016 စာရင်း
Salman Khan အစ်မ arpita Khan အတ္ထုပ္ပတ္တိ